Aya mabasa matanhatu akanyangarika neIOS 11 | IPhone nhau
Izvi ndizvo zvinhu zvakatsakatika muIOS 11 uye izvo zvatisuwa
Iko kushanduka kwemaitiro ekushanda Inoita mamwe emabasa atakakura kuti anyangarika nekubwaira kweziso. Kana vashandisi vakati izvo maficha pane mukana wekuti ivo vachazosanganiswazve mune nyowani yekuvandudza. Iyi ndiyo kesi yebasa rakatsakatika muIOS 11 kuti uwane multitasking nekutsikirira pamucheto kwechidzitiro, icho chakadzoka muIOS 11.1 nekuda kwekumanikidza kwevashandisi. Nhasi tinoongorora Zvitanhatu Zvimiro Takatadza MuIOS 11 Kuenzaniswa neIOS 10 uye kuti vazhinji venyu vangangopotsa.
1 32-bit kunyorera
2 Control Center muIOS 11
3 Twitter uye Facebook kubatanidzwa
4 ICloud Drive inova maFaira
5 Zvibereko muDirect Center
6 Kumanikidza App Store kurodha zvakare
Apple yakaratidza zvakajeka: iOS 11 haizove 32-bit inoenderana. Izvo zvine musoro sezvo angangoita ese madhizaini eBig Apple parizvino ane makuru uye ane simba mapurosesa anoshanda pamakumi matanhatu emabheti uye ndosaka Apple yakadzokororazve vanogadzira kuti vagadzirise mafomu avo eiyo nyowani Hupenyu hweIOS.
Control Center muIOS 11
Yakagadziriswa zvachose, kunyanya paIpad. MuIOS 10 kana iwe ukasvetuka kumusoro unopinda iyo inodzora nzvimbo. Kana muIOS 11 ukatsvedza iwe unosvika a rakagadziriswazve uye rakaonda kudzora nzvimbo, pamusoro pe multitasking iyo inotora chikamu chikuru cheiyo skrini. Iko kugadzirisa patsva kuti vazhinji havana kunyatso kugutsikana, asi iyo dock yakawedzera ipfungwa yekuwedzera mune yese system.
Twitter uye Facebook kubatanidzwa
Apple yakafunga kuti kusangana nemagariro network se Twitter neFacebook hazvisisina nzvimbo pane inoshanda sisitimu yako. Vazhinji vashandisi vakashandisa chimiro ichi kugovana zvemukati pamadandemutande avo zviri nyore kubva kubhatani rekugovana, iro rakawanikwa munenge munzvimbo dzese dzehurongwa hwekushandisa.
ICloud Drive inova maFaira
MuIOS 10 maive iCloud Dhiraivha, chishandiso chakatibvumidza isu kuti tione mafaera ataive takaisa kune iro Apple gore. MuIOS 11 izvi zvachinja uye isu tatova nazvo Zvakarekodha, chirongwa chine simba chinobatanidza makore akati wandei ekuchengetera ayo atinogona kubata zvemukati nekukurumidza uye nemazvo.
Zvibereko muDirect Center
ari vatambi vaviri iyo yakakamurwa muIOS 10 Control Center vakabatana mune redesigned control centre muIOS 11. Nzira yekuisa zviri mukati izvo vashandisi vazhinji vasina kuwana zvinoshanda.
Kumanikidza App Store kurodha zvakare
Dzimwe nguva App Store yakavharwa. MuIOS 10 tinogona kuzorodza zvirimo kudzvanya kagumi mumutsara pane rimwe remazita ezasi. Ne iOS 10 izvi zvinonyangarika uye kana iyo App Store ikaparara tinofanirwa kumirira kuti zviratidzike kuti zvionekwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Izvi ndizvo zvinhu zvakatsakatika muIOS 11 uye izvo zvatisuwa
Ivo vanoshaya iyo yekuda rondedzero yeapp shop, kusvika parizvino ndichiri kushaya maapplication andaive nawo ipapo uye andisingakwanise kuyeuka kurodha pasi.
Ini ndasuwa hupenyu hwangu hwehupenyu hwehove idzo dzakaunzwa nema iPhone 6s, vakasiya zvakaipa
Kuremadza WIFI neBluetooth kubva kunzvimbo yekudzora, kurasikirwa kukuru kwati tamboita.
Ndeipi njodzi iOS 11.
Chiso ID inotarisana kumeso kuzivikanwa kubva kune mamwe madhivha
Apple Watch GymKit debuts muNew York